နေပြည်တော်ဒီဇိုင်း (၃)။ အီး-အစိုးရ
၁။ ဆက်သွယ်ရေး ဧရိယာပြင်ပ/ ဟိုင်းဝေးဘေးက လမ်းမြောင်
ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေအကြောင်း စာအုပ်ရေးဖို့ ဘင် ရော်ဂျာက မြန်မာပြည်မှာ ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ယူ ခဲ့ဖူးတဲ့ မာ့က် ကန်းနင်း (Mark Canning) ကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းတော့ နေပြည်တော်ကို သူခရီးသွားခဲ့တဲ့ အတွေ့ အကြုံမှတ်ချက်ကို ပြောပြတာ ဖတ်ရတယ်။ နေပြည်တော်ကို သွားရာလမ်းမှာ အသစ်ခင်းထားတဲ့ ဟိုင်းဝေး ကားလမ်းမကြီးကို ဖြတ်သွားရ တယ်။ နောက်တော့မှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုရောက်ဖို့ အဲဒီလမ်းမကြီးကနေ ဖုန်တွေထနေတဲ့ လမ်းကျဉ်းလေးတခုကို ဖြတ်ပြီးဝင်ရတယ်တဲ့။ နောက်ကြုံရတာကတော့ အဲဒီနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနရုံးမှာ ကားရပ်နားစရာနေရာ (parking) လည်း မရှိပြန်ဘူးလို့ မာ့က် ကန်နင်းက ပြောပြတာ ဖတ်ရတယ်။ "တကယ်တော့ဗျာ နိုင်ငံတကာကို ဆက်ဆံဖို့ထားတဲ့ နိုင်ငံတခုရဲ့မျက်နှာစာ (interface) နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးဌာနရုံးမှာ ကားရပ်နားစရာနေရာ ထားပေးဖို့ဆိုတာ ကျိုးကြောင်း မဆီလျော်လှဘူးလားဗျာ" တဲ့ သူက ဘင် ရော်ဂျာကို မှတ်ချက်ချ ပြန်ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
တကယ်တော့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှသာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံက ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပ၊ နိုင်ငံ တကာ သတင်း ဆက်သွယ်ရေး ဟိုင်းဝေး လမ်းမကြီးရဲ့ ပြင်ပမှာ ရောက်နေတာပါ။ သူများနိုင်ငံမှာ အခမဲ့သုံးလို့ ရတဲ့ကိစ္စ အင်တာ နက် ဆက်သွယ်ရေးကိစ္စ၊ အီး-မေးလ် စသဖြင့်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ ဖက်စ် (Faximile) စက်ဖမ်းမိလို့ ထောင်ချခံရပြီး ဂုဏ်ထူးဆောင် ကောင်စစ်ဝန် မစ္စတာလီယိုနီကိုးလ် ထောင်တွင်း သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ကိစ္စဟာလည်း မြန်မာ နိုင်ငံသမိုင်းမှာ ထူးထူးခြားခြား ရှိခဲ့ပါ တယ်။ တခါ သိပ်မကြာသေးခင်ကပဲ အင်တာနက်ပေါ်ကနေ အခမဲ့နီးပါး ဈေးချိုစွာ သုံးစွဲပြောဆိုလို့ရတဲ့ VOIP ဖုန်းစနစ်တွေကို ပိတ်ပင်ကြောင်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ အကြောင်းပြချက်ကတော့ နိုင်ငံတော်အစိုးရ ဖုန်းဆက်သွယ်ခတွေကနေ ရတဲ့ ၀င်ငွေလျှော့လို့ ဖြစ်ပါသတဲ့။ အခု လွှတ် တော်တက်နေတဲ့ အမတ်တဦးရဲ့ အင်တာဗျူးကို ဖတ်ရတော့လည်း နေပြည်တော်သူတို့ တည်းခိုရာအဆောင်မှာ ကွန်ပြူ တာတော့ ထားပေး တယ်။ အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးစနစ် မရှိဘဲ နေထိုင်နေကြရတယ်ဆိုတာ မေးမြန်းခန်းတခုမှာ ဖတ်ခဲ့ရတယ်။ အင်တာနက်မြန်နှုန်းကလည်း နှေးလွန်းတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်တာနက်ကို "အင်တာပျက်"လို့ တောင် ခေါ်ဆိုနေကြပါပြီ။ စစ်အစိုးရကြွေးကြော်ထားခဲ့သလို ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်သစ်ကြီးဆီကို အင်တာနက် တွေ၊ ခေတ်မှီဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာတွေ မရှိဘဲ ဘယ်လိုသွားကြမှာလည်း ဆိုတာ စဉ်းစား စရာပါ။
တကယ်က အရင်ခေတ်က "အ" သုံးလုံး (အရေး၊ အဖတ်၊ အတွက်) ဆိုတာ မတတ်ရင်မဖြစ်သလို၊ ဒီဖက်ခေတ် မှာက အင်တာနက်မတတ်ရင် လူရာမ၀င်၊ စာမတတ်တဲ့ခေတ်ကို ရောက်နေပါပြီ။ တကယ်တော့ သတင်း (Information)၊ အချက်အလက် ဒေတာ (Data)၊ သုတ (Knowledge) နဲ့ ဉာဏ်ပညာ (Wisdom) တို့ဟာ အဆက်အစပ်ရှိနေကြပါတယ်။ သတင်းတွေကို သုတေသနပြုပြီးမှ၊ စနစ်တကျ စုဆောင်းပြီးမှ ဒေတာ (data) တွေ ရလာပါတယ်။ သုတ (knowledge) ကို သတင်းအချက်အလက်တွေပေါ်ကနေ အခြေခံတည်ဆောက် နိုင်ပါတယ်။ ဒီသုတ (Knowledge) တွေကို အသုံးချနိုင် မှသာ (wisdom) ဉာဏ်ပညာ ဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်လာ ပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ လူသားမျိုးနွယ်တရပ်လုံးကို တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုး စေဖို့ ဒီလိုဉာဏ်ပညာတွေ အသုံးချ ကြရတာပါ။
သတင်းတွေ၊ ဒေတာတွေကို အခုလို နည်းပညာခေတ်ကြီးမှာ အလွယ်တကူ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ သုတကို တည် ဆောက်နိုင်ကြပါတယ်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုလည်း အသိသုတပြည့်စုံတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်း (knowledge society) အဖြစ် ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
သတင်းတွေကို တနည်းပြောရင် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေအဖြစ်လည်း အသုံးချနိုင်ပါသေးတယ်။ ကမ္ဘာလွှမ်း ပတ်ဆက်သွယ်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ သတင်းနောက်ကျရင် စီးပွားရေးအရ နစ်နာစရာတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ ထုတ်လုပ်ရာ၊ သိုလှောင်ရာ၊ ဖလှယ်ရာ၊ ဖြန့်ဖြူးရာ၊ တဆင့် ကုန်ဆက်လက်ထုတ်လုပ်ရာ (processing)၊ ထိန်းချုပ်ရာ ကိစ္စတွေမှာ သတင်းတွေက အရေးပါလှပါတယ်။ ကုန်ထုတ်အင်အားစုမှာတောင် လူတွေလုပ်အားသာမက၊ သတင်း လုပ်အား (information power/ intellectual power) ပါ အရေးပါလာပါပြီ။
ဒီအနေအထားမှာ အစိုးရတွေက ခေတ်မှီ သတင်းနည်းပညာတွေကို အသုံးချပြီး အီး-အစိုးရ (e-government) တနည်း (electronic government) စနစ် ထူထောင်ဖို့ ပြောဆိုလာကြတာ ကြာပါပြီ။ ဆယ်စုနှစ်တခုမက ရှိပါ တော့မယ်။ အီး-အစိုးရ ဆိုတာက ခေတ်မီသတင်းနည်း ပညာတွေ သုံးပြီး အစိုးရရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကို ထက်မြက်ထိရောက်လာ စေဖို့၊ ပိုမိုမြန်ဆန်လာစေဖို့ ရည်ရွယ်တာပါ။ ဒီလို e-government စနစ်ကို တနည်း ဒစ်ဂျစ်တယ်အစိုးရ၊ အွန်လိုင်း အစိုးရ၊ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ အစိုးရ (connected government) လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။ သဘောကတော့ အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံသား တွေအကြား (G2C)၊ အစိုးရနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ ကုမ္ပဏီတွေအကြား (G2B)၊ အစိုးရ-အစိုးရအချင်းချင်းအကြား (G2G)၊ အစိုးရနဲ့ အိမ်ထောင်စုတွေအကြား (G2H) ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းစနစ်နဲ့ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်နိုင်အောင် (digital interaction) တည်ဆောက်ထား တဲ့ စနစ်မျိုးပါ။ ဒီအခါမှာ အစိုးရရုံးတွေကလည်း ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာတွေသုံးပြီး ပိုမို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်။ အစိုးရဌာန အချင်းချင်းအကြားမှာလည်း ဆက်သွယ်-ထိန်းချုပ်-လုပ်ကိုင်မှု ပိုမိုလျှင်မြန် လာမယ်။ ၀န်ဆောင်မှုတွေ ပိုအားကောင်းလာမယ်။ လူထုတွေ (မဲဆန္ဒရှင်တွေ) ဖက်ကလည်း ပါဝင်ဆောင် ရွက်မှု ပိုမို အားကောင်းလာမယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေ (governance) ကလည်း ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာဖို့ ရှိပါတယ်။ မြန်မာစစ် အစိုးရ ကိုယ်၌ကလည်း e-government ဆိုပြီး ပြောခဲ့တာ ကြာပါပေါ့လား။
၃။ (စာတွေ့) မြန်မာ အီး-အစိုးရ စီမံကိန်း
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကတည်းကစပြီး ICT လုပ်ငန်းတွေအတွက် အစမ်းပျိုးစီမံကိန်း ၇-ခုနဲ့စမယ်။ အီး-အစိုးရလုပ်ငန်း တွေ စတင်တော့မယ်ဆိုပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခုဆိုရင် ၇ နှစ် သက်တမ်း ကျော်လာပါပြီ။ အစမ်းပျိုး စီမံကိန်း ၇-ခု က ဒီကိစ္စတွေပါ။
Myanmar e-Government projects
၁။ စမတ်ကဒ် Smart Card : ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက် ကဒ် ၂, ၀၀၀၊ ဇွန် ၂၀၀၂။
၂။ စမတ်ကျောင်းများ Smart Schools : အထက်တန်း ၃ ကျောင်း တပ်ဆင်ပြီး။ သြဂုတ် ၂၀၀၂။
၃။ အီး-ပတ်စ်ပို့တ် e-Passport : ၅,၀၀၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၂။
၄။ အီး-ဗီဇာ e-Visa : ၂၀၀၂ အကုန်တွင် စတင်မည်ဟု ဆို။
၅။ TEDI (Trade Electronic Data Interchange) ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဒေတာဖလှယ်မှု : လုပ်ဆောင်ဆဲ
၆။ အစိုးရ၏ အီး- ၀ယ်ယူစုဆောင်းမှု e-Procurement : လုပ်ဆောင်ဆဲ
၇။ လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးရေး အာဏာပိုင်အဖွဲ့ Certification Authority : လုပ်ဆောင်ဆဲ
ပြောရမယ်ဆိုရင် စင်္ကာံပူမှာ ကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအတွင်း အီး-အာဆီယံ သဘောတူညီချက် (e-ASEAN Framework Agreement) ကို သဘောတူညီ လက်မှတ်ရေးထိုး လာပြီးကတည်း က မြန်မာအစိုးရမှာ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ တာဝန်ရှိလာပါတယ်။ အာဆီယံနိုင်ငံတွေအတွင်း အခြေခံအဆောက်အဦ တွေ တည်ဆောက်လုပ်ကိုင်ဖို့လည်း အကူအညီတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အာဆီယံနိုင်ငံတွေ အတွင်း ဆက်သွယ်ရေးကွာဟ ချက်တွေ မရှိရလေအောင်၊ ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေက လူထုတွေအချင်းချင်း ဆက်သွယ်မှုကောင်းရလေအောင် ရည်ရွယ် လုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ ၁၉၉၆ ကတည်းက တည်ထောင်ထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပြူတာနည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ အောက်မှာ e-National Task Force (အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့) ဆိုပြီး တာဝန်ပေး လုပ်ကိုင်စေခဲ့တယ်။ ဒီ ကွန်ပြူတာ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှု ကောင်စီမှာ အဓိက တာဝန်ရှိတာက စစ်အစိုးရရဲ့ အတွင်းရေးမှူး (၁)- အခု ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း သီဟသူရ တင်အောင်မြင့်ဦးပေါ့။ အဲဒီက ချမှတ်တဲ့ အစီအစဉ်တွေကို ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နဲ့ ကြေနန်းဝန်ကြီးက အကောင်အထည် ဖော်ရတယ်။ အခုလက်ရှိ ၀န်ကြီးက ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းသိန်းဇော်ပါ။
၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ကိုရီးယားအစိုးရဆီက ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂। ၅ သန်း ရခဲ့ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံက ၀န်ကြီးဌာနတွေကို ကွန်ပြူတာစနစ်တပ်ဆင်ဖို့၊ အဆင့်မြင့် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်စနစ် (high speed internet) တပ်ဆင်ဖို့ ဒေ၀ူးအင်တာ နေရှင်နယ် ကုမ္ပဏီကို ကန်ထရိုက် ပြန်ငှားခဲ့တယ်။
အဲသည်မှာ မြန်မာ အီး-အစိုးရအတွက် ရည်မှန်းထားချက်တွေကလည်း မြင့်ပါပေ့။ အဆင့် (၁) ၂၀၀၆-၂၀၁၀ မှာ အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ ပျမ်းမျှအဆင့်အတန်းကို လိုက်မီရမယ် ဆိုပါတယ်။ အဆင့် (၂) ၂၀၁၁-၂၀၁၅ မှာတော့ အာဆီယံရှေ့ ပြေးတိုးတက်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရပါမယ်တဲ့။ [အခုဆိုရင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ရောက်နေပြီဆိုတော့ အခု ဘယ် အဆင့်မှာ ရောက်နေတယ်ဆိုတာ မြန်မာပြည်သူတွေ သိလောက်ပါတယ်။] အဆင့် (၃) ၂၀၁၆-၂၀၂၀ မှာတော့ ကိုယ်ပိုင် မိုဒယ်ထုတ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှု အဆင့်နိမ့်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေကိုတောင် ကိုယ်က ဦးဆောင်မှုပေးတော့မယ် ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ မြန်မာ အီး-အစိုးရအဆင့်က ခါချဉ်ကောင်မာန်ကြီးလို့ တောင်ကြီးကို ဖြိုမယ်ကြံ၊ အားက မသန်ဘဲ ရှိနေပါသေးတယ်။ UN eGovernment Readiness Index (အီး-အစိုးရအတွက် အဆင်သင့် ဖြစ်မှုအနေအထား) မှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ၁၉၁ ခုမှာ ၂၀၀၄ စာရင်းအရ မြန်မာအစိုးရရဲ့ အီး-အစိုးရ အဆင်သင့်ဖြစ်မှု အဆင့်နေရာက ၁၂၃ မှာပဲ ရှိနေ သေးတယ်။ ၀က်ဘ်ညွှန်းကိန်း (Web index) မှာလည်း နိုင်ငံ ၁၉၁ နိုင်ငံ အနက်က အဆင့် ၁၀၀ မှာ၊ တယ်လီကွန်မြူနီ ကေးရှင်း အဆင့် (Telecommunication index) မှာတော့ နိုင်ငံ ၁၉၁ ခုမှာ အဆင့် ၁၈၂ နဲ့ နောက်ဆုံးက လိုက်နေပါ တယ်။
Korea Information Strategy Development Institute (KISDI) က ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ ဌာနတွေမှာ စစ်တမ်းတခု ကောက်ယူခဲ့ပါသေးတယ်။ အစိုးရဌာနတွေမှာ သတင်းကွန်ရက်စနစ်တခုခုနဲ့ ချိတ် ဆက်ထားမှုက ၄၆% ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအထဲက ၁၁% ကပဲ အွန်လိုင်းကတဆင့် လူထုတွေကို ၀န်ဆောင်မှုပေးနေသေး တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သဘောကတော့ အွန်လိုင်းကနေ ပြည်သူလူထုက ဆောင်ရွက် နိုင်တာက အနည်းအကျဉ်းမျှပဲ ရှိနေ သေးတဲ့သဘောပါ။ အခု ပြည်ပထွက်ဖို့ အွန်လိုင်းကနေ D-Form တင်နိုင် တာကိုပဲ တကယ့်အောင်မြင်မှုကြီးလို ပြောနေရ တဲ့ အနေအထားပါ။ ဘဏ်အချင်းချင်း စာရင်းရှင်းတဲ့ အွန်လိုင်း စနစ်မရှိ၊ အလိုအလျောက် ငွေထုတ်စက် (ATM) မရှိသေး တဲ့နိုင်ငံပါ။ အစိုးရ ၀န်ကြီးဌာန ၀က်ဘ်စာမျက်နှာ တွေသွားကြည့်ရင်လည်း သေနေတဲ့လင့်ခ် (link) ကသေ၊ အလုပ် မလုပ် တဲ့ စာမျက်နှာက မလုပ်၊ ရှိနေရင် လည်း သတင်းတွေကလည်း နှစ်ဆွေးတွေ၊ ဘာမှ အားကိုးလို့ မရသလောက်ရှိပါတယ်။ အစိုးရရဲ့ စာရင်အင်းဌာန (CSO) ၀က်ဘ်ဆိုဒ်သွားကြည့်တော့လည်း ရနိုင်တဲ့ အချက်အလက်က နည်းနည်းလေးပါ။ ဒါ တောင်မှ တချို့ သတင်းစာတွေမှာ အစိုးရက e-procurement အွန်လိုင်းက ၀ယ်ယူတဲ့စနစ်၊ အွန်လိုင်းက ရောင်းချတဲ့စနစ် တွေရှိတော့မယ် ဆိုတာမျိုး မစားရ၀ခမန်း ပြောဆိုနေတာ ကြားရပါသေးတယ်။
ဆိုပါစို့။ ကျနော်က မြန်မာပြည်က ဥပဒေတခု မသိဘူး။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရှာဖွေကြည့်နိုင်တဲ့ အနေ အထားမရှိပါဘူး။ အခွန် ဘယ်လိုဆောင်ရမယ် မသိဘူး။ အွန်လိုင်းကတဆင့် အခွန်ဆောင်ဖို့ အသာထားဦး၊ အခွန်ဘယ်လိုဆောင်ရမယ် ဆိုတဲ့ ညွှန်ကြားချက်တောင် အင်တာနက်မှာ မရှိပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာက အခု တမျိုး၊ တော်ကြာတမျိုး နှုတ်မိန့်တွေနဲ့ အလုပ် လုပ်နေတော့ ဘာကိုမှအားကိုးအားထားမရတော့တဲ့ အနေ အထား ဖြစ်လာပါတယ်။ မြန်မာတွေအားလုံးသုံးဖို့ ယူနီကုဒ် စံကျဖောင့် ရှိပါပြီလား။ တချို့က ဇော်ဂျီ၊ တချို့က My Myanmar -3၊ တချို့က မြန်မာယူနီကုဒ်॥ စသဖြင့် ငြင်းနေကြ တာတွေ ကြား ကြရပါလိမ့်ဦးမယ်။ (ဒါပေမယ့် ၇ နှစ်ကြာပြီးမှ၊ ဒေါ်လာ ၁၂ သန်းကျော်သုံးပြီးမှ မြန်မာ ပတ်စ်ပို့တွေ အခုလို နည်းနည်းလေး သပ်သပ်ယပ်ယပ်ထွက်လာတာတော့ အမှတ်ပေးဖို့ ရှိပါတယ်။)
မြန်မာကွန်ပြူတာ ဖက်ဒရေးရှင်း (MCF) ရဲ့ လေ့လာချက်တခုအရ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေက ကွန်ပြူတာ အသိသုတ အတော် နည်းနေသေးတာ တွေ့ရတယ်။ ကွန်ပြူတာ စာတတ်မှုနှုန်း နိမ့်တယ်တောင် ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အစိုးရ၀န်ထမ်း ၁၀၀ မှာ ပီစီ ကွန်ပြူတာ PC Computer သုံးသူက ၁. ၃% ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ထားနိုင်တာက ၀.၀၆% ပဲ ရှိပါ သေးတယ်။ အီး-မေးလ်သုံးနိုင်တာက ၀.၀၃% ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ (၂၀၀၄ လေ့လာချက်)
၄။ မြန်မာ IT ပညာရှင်တွေနည်းသလား။
တလောက မြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့ ကွန်ပြူတာ ပညာရှင်တယောက်နဲ့ စကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်က အစိုးရ လုပ်ငန်း တွေမှာ (office automation) လို့ခေါ်တဲ့ ကွန်ပြူတာစနစ်တွေ တပ်ဆင်သုံးဖို့ဆိုရင် ဘယ်လောက် ကြာမယ်၊ ဘယ်လို အခက်အခဲတွေ ရှိမယ်ဆိုတာ ဆွေးနွေးမိတာပါ။ ကျနော်က အုပ်ချုပ်ရေးရှုထောင့်ဖက်က ဆွေးနွေးပြီး၊ သူကတော့ ကွန်ပြူတာအမြင် သက်သက်ဖက်က ပြောတာ။ ဒါပေမယ့် တူနေသလို ဖြစ်နေကြ တယ်။
သူပြောတာက အစိုးရရဲ့စနစ်ကို ကွန်ပြူတာပေါ်တင်မယ်ဆိုရင် ဒီဇိုင်းဆွဲဖို့ဆိုတာ ကွန်ပြူတာပညာရှင် အလုပ် သာမဟုတ်။ အစိုးရဖက်ကလည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာ သူက ပြောပါတယ်။ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ လူထုကို အသိပေးမှာလဲ။ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ ပွင့်လင်း (transparent) ဖြစ်မှာလဲ။ အစိုးရအနေနဲ့ ပြည်သူ တွေအတွက် ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ ၀န်ဆောင်မှုပေးဖို့ ရည်သန်ထားသလား။ Feedback တုံ့ပြန်မှုတွေရှိလာရင် အစိုးရက ပြန်ပြင်ဆင်မှာလား။ အစိုးရ ဌာနအချင်းချင်းကရော ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှု ပြုကြမှာလဲ။ သူ့ဝန်ကြီးဌာန-ငါ့ ၀န်ကြီးဌာန စားကွက်တွေတံတိုင်းကာနေကြမှာလား။ အစိုးရဌာနအချင်းချင်း ပူးပေါင်း ဆက်ဆံမှု (intraoperaility framework) အတွက် မူဝါဒတွေ၊ လမ်းညွှန်တွေ၊ ဒေတာတွေ အလွယ်တကူ ဖြစ်အောင် ပြင် ဆင်ထားတာတွေ (data simplification)၊ လိုက်လျောညီထွေ ပြင်ဆင်မှု (Harmonization)၊ စံချ သတ်မှတ်ပြုပြင်မှုတွေ (standardization) တွေ လိုအပ်ပါတယ်။ အစိုးရဖက်က ဒါတွေလုပ်ပြီး ကျန်တဲ့ ကွန်ပြူတာပညာရှင်ကမှ ဒီဇိုင်းဆွဲကြရမှာပါ။
သူပြောတာတွေ ကျနော်နားထောင်ရင်း ကျနော်တို့က 386 ကွန်ပြူတာအဟောင်းကို Windows7စနစ်အသစ် တင်ချင် သလို နေတာလားလို့ တွေးမိပါတယ်။ သူ့စနစ်က သိပ်အပိတ်ဆန်၊ သိပ်မာတောင့်နေတယ်။ စနစ် အသစ်တင်ဖို့ဆိုရင် အများကြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရဖို့ ရှိနေတယ်လို့ မြင်မိတယ်။
ကွန်ပြူတာပညာရှင်တွေက မြန်မာပြည်မှာ မနည်းပါဘူး။ မြန်မာကွန်ပြူတာ ဖက်ဒရေးရှင်းရဲ့ လေ့လာထား ချက်အရ အဆင့် မြင့် ကွန်ပြူတာပညာရှင် ၁,၀၀၀ ကျော်နဲ့ ၀ါနု ပညာရှင် ၈,၀၀၀ ကျော် ရှိနေသေးတယ်။ ၂၀၂၅ ခုနှစ်ကျရင် ဆော့ဝဲယား ရေးနိုင်တဲ့ ပညာရှင် ၂၅,၀၀၀ လောက် ဖြစ်လာဖို့လည်း ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ တွေက အစိုးရရဲ့ ထောက်ပံ့အားပေးမှုကို မရနိုင်ကြဘူး။ ကိုယ့်ပညာတိုးချင်ရင်၊ ကိုယ့်ဘာသာ သုတေသန လုပ်ငန်းတွေ စချင်ရင် ငွေမလိုက်နိုင်ဖြစ်ကြရတယ်။ နောက်ဆုံးစင်္ကာပူလို တိုးတက်ပြီးနိုင်ငံတွေကို ပြောင်း ရွှေ့အခြေချဖို့သာ ဖြစ်လာစေတော့တယ်။ ကွန်ပြူတာပညာရှင်တွေ လည်း သမင်မွေးလိုက်၊ ကျားစားလိုက် ဖြစ်ကုန်တော့တယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကာလက လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အစည်းအဝေးတွေ ကျင်းပတော့ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် တွေရှေ့မှာ ကွန်ပြူတာကိုယ်စီနဲ့ အစည်းအဝေးထိုင်နေတာကို ဓာတ်ပုံထဲမှာ မြင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ကော်မရှင် ကြေညာချက်တွေထွက်လာတော့ မဲပေးသူက ၁၀၄% ဖြစ်လိုဖြစ်၊ ၁၀၀% အပြည့် ဖြစ်လိုဖြစ်၊ အကြိမ်ကြိမ် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်၊ ပြန်ပြင်လိုက် လုပ်နေကြတာ ဒီကွန်ပြူတာ တွေမှ တကယ်အသုံးချ တွက်ချက်ရဲ့လားဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာပါ။ အဲဒါအပြင် ရွေးကောက်ပွဲကာလက အချက်အလက်တွေကို အားကိုးရှာဖွေချင်ရင် အစိုးရကော်မရှင် က ထုတ်ပြန်တာမဟုတ်တဲ့ ပြင်ပ တသီးပုဂ္ဂလ သုတေသနပြု စုဆောင်းထားသူတွေရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်ဒ်တွေ၊ ဒေတာတွေ ကိုပဲ အားကိုးခဲ့ရပါတယ်။ အခု တိုင် အောင်လည်း အစိုးရရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပိုင် ၀က်ဘ်ဆိုက်ဒ်၊ အင်တာနက် စာမျက်နှာ၊ အချက်အလက်တွေ ရယူနိုင်တဲ့ နေရာတွေ မရှိသေးပါဘူး။
သူများနိုင်ငံတွေမှာတော့ ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ်က အွန်လိုင်းတက်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့ ချတ်ရွမ်းမှာ ပြောတယ်။ တရုတ် သမ္မတက ပြည်သူတွေနဲ့ အွန်လိုင်းမှာ ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာမျိုး ကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။ မွန်ဂိုလီးယား ၀န်ကြီး ချုပ် အယ်လ်ဘာဒေါ့ခ်ျကလည်း သူ့ပြည်သူတွေကို အီး-မေးထားကြဖို့၊ သူ့ဆီတိုက်ရိုက် အီး-မေးလ်ရေးကြဖို့ တိုက်တွန်းဖူး ပါတယ်။ "လူတိုင်းဟာ အီး-မေးလ်တခု ရှိသင့်တယ်။ ဒီအခါ ခွန်အားအာဏာ ရှိလာမယ်" လို့ သူက ပြောတာကို ဖတ်ခဲ့ ရဖူးပါတယ်။
ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်သစ်ကြီးဆီကို ခေတ်မီသတင်းနည်းပညာတွေ မပါဘဲ၊ အစိုးရကိုယ်တိုင် ကလည်း ဒီနည်းပညာတွေကို အသုံးမချဘဲ ဘယ်လိုသွားမှာလဲ ဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ကောင်းလှပါတယ်။ e-government ဖြစ်ဖို့ ဒီလိုလိပ်သွားနှုန်းနဲ့ သွားနေရင် ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေက စောင့်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့က သူတို့နှုန်းနဲ့ ရှေ့က ပြေးနေ ကြတာပါ။ ကျနော်တို့တတွေလည်း ဘယ်တော့များမှ အင်တာနက်ကို လွတ်လွတ် လပ်လပ် သုံးနိုင်တဲ့ဘ၀၊ အီး-နိုင်ငံသား တွေ (e-citizens) ဘ၀ ဖြစ်ကြရပါလိမ့်နော်...။
မတ်လ ၂၀ ရက်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်။
၁။ Unknown author, INFORMATIZATION STATUS IN MYANMAR, avialable online at http://www.dof.or.kr/pdf/Myanmar%5BWD%5D.pdf
၂။ Myanmar prepares for launching egovernment system, Hoovers, August 5, 2003.
eGovernment Resource Center, Australia, avialable online at http://www.egov.vic.gov.au/focus-on-countries/asia/myanmar.html
၃။ Daewoo International signs $12m Myanmar e-government deal. The Korea Herald, 23 May 2005. eGovernment Resource Center, Australia, avialable online at http://www.egov.vic.gov.au/focus-on-countries/asia/myanmar.html
၄။ Myanmar to launch e-procurement system. www.chinaview.cn, 1 April 2004.
၅။ Buy online in Burma. Kablenet,6April 2004.
၆။ U Than Htun Aung, Presentation on (Myanmar) Country Report on Internet Governance, 13th Sub-Regional Telecommunication Meeting for CLMV Countries, 4~6 October 2006, avialable online at http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/2006/subregional_clmv/docs/2-4-mmr.pdf
၇။ Vawn Himmelsbach, Myanmar e-Government isaSham, ITBusiness.ca avialable oneline at http://www.itbusiness.ca/it/client/en/home/News.asp?id=4659
၈။ Thein Oo and Myint Myint Than, ‘.mm’ Myanmar, Digital Review of Asia Pacifi c 2009–2010, avialable online at http://www.digital-review.org/uploads/files/pdf/2009-2010/chap-32_myanmar.pdf
Posted by ရွက်မွန် at 3:28 PM
Mr Burma Editor said...
copied and posted it on http://mrburmaeditor.blogspot.com/2011/04/blog-post.html